प्रचण्ड काण्डै काण्डमा मुछिएका यी बिबादित व्यक्तिसँग अमेरिका गएको खुलासा, को हुन उनी ? — Sanchar Kendra
प्रचण्ड काण्डै काण्डमा मुछिएका यी बिबादित व्यक्तिसँग अमेरिका गएको खुलासा, को हुन उनी ?
काठमाडौं । एक जना विवादीत व्यक्तिसँग नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण भएको खुलेको छ । उनै विवादीतले नै उनको अमेरिका भ्रमण सहजीकरण गराएको पनि उल्लेख छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
अमेरिकी गुप्तचरीको काम पनि गर्ने आशंका गरिएका अमेरिकी मूलका नेपाली नागरिक चाल्र्स विलियम मेन्डिज प्रचण्डसँग देखिएका थिए । फ्रि तिब्बत अभियानका लागि अमेरिकी रकम नेपाली भूमीमा प्रयोग गर्नेमात्र नभएर उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिसँग विविध काममा मेन्डिजको भूमिका ‘शंकास्पद’ मानिन्छ ।
प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । युद्धको विषयमा उनीविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी परेको थियो । यो विषयलाई प्रचण्ड आफैंले पनि अनेक पटक पुष्टि गरिसकेका छन् । खासमा प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका पुगेका थिए ।
प्रचण्ड अमेरिकाबाट फर्किने क्रममा न्युयोर्क विमानस्थलमा खिचिएको एउटा तस्बिरमा चाल्र्स विलियम मेन्डिज पनि देखिएका छन् । सुरक्षा संयन्त्रका प्रमूख तथा विभिन्न राजनीतिज्ञले पनि उनलाई ‘पावर ब्रोकर’ भनेर बुझ्ने गरेका छन् ।
हालका एआइजी पुष्पकर कार्की काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमूख हुँदा मेन्डिजलाई चेक बाउन्सको अभियोगको उजुरी परेको थियो । उनै मेन्डिजसँग रहेको सम्बन्धका आधारमा केही समयअघि कार्की तिब्बती अभियानकर्मीसँग नजिक पनि रहेको बताइन्छ ।
विवादीत मेन्डिजलाई प्रहरीले उनका व्यापारीक साझेदारी अमेरिकन नागरिक अलेक्जेन्डर बोरिसको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो । बोरिसले लिखित उजुरी दिएपछि शक्ति केन्द्रको वरीपरि भए पनि मेन्डिजलाई पक्राउ नगरी नहुने अवस्थामा प्रहरी पुगेको थियो ।
मेन्डिज बैंकिङ कसुर अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । मेन्डिजको संगत उच्च तहका राजनीतिक व्यक्ति, पूर्वराजपरिवारका सदस्य र काठमाडौंका उच्च घरानीया परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मात्र पत्ता लागेन, उनी कुटनीतिक अभियानमा पनि सक्रिय रहेको सुरक्षा अधिकारीले पत्तो लगाएका थिए ।
मेन्डिज गोसाईकुन्डका नियमित ग्राहक भएर सोल्टी होटलमा बस्ने गर्छन् । मेन्डिजले त्यसबेला साझेदार बनाएका बोरिसलाई तीनवटा चेक दिएका थिए– ५० लाख, ३० लाख र १६ लाखको । तीनै चेक बाउन्स भएपछि उनीविरुद्ध उजुरी गरिएको थियो ।
शक्ति केन्द्रमा खेल्ने भएकाले सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नजिक रहेका कार्यकर्ता र नेतासँग मेन्डिजको दह्रो उठबस छ । खासगरी पर्यटन व्यावसायसँग सम्बन्धित प्रचण्डनजिकका कतिपयलाई उनले समातेका थिए ।
प्रचण्डको संगत मेन्डिजसँग मात्र होइन, हरके विदेश भ्रमणमा विवादीतसँग हुने गरेको छैन । सचिवालयले ध्यान नदिँदा उनको यस्तो सम्बन्ध बेलामौका बाहिर आउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएर भारत गएका बेला नेपाल सरकारले खोजी सूचीमा रहेका रेशमलाल चौधरीसँग उनको भेट भएको थियो । त्यस विषयमा पनि प्रचण्ड आलोचित भएका थिए । विवादीत व्यापारी अजेयराज सुमार्गी, विवादीत ठेकेदार शारदा अधिकारीको घरमा नै उनी बसेको विषय पनि चर्चामा आएको थियो ।
अमेरिकामा जे पनि हुनसक्थ्यो- प्रचण्ड
यसैबीच अमेरिका भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका प्रचण्डले अमेरिकी सरकारले ‘नो इन्भेस्टिगेसन’ जारी नगरेको भए आफूलाई जे पनि हुन सक्ने बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकामा आफूले तीतो अनुभव गरेको बताए।
‘अमेरिकी सरकारले नो इन्भेस्टिगेसन जारी नगरेको त मलाई त्यहाँ जे पनि हुने रहेछ। केही मानिसले मलाई प्रचण्ड हत्यारा हो अपराधी हो भनेर त्यतै जेल हाल्ने योजना रहेछ,’ उनले भने, ‘के मैले शान्ति सम्झौता गरेर अपराध गरें। संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेर र देशलाई एकतावद्ध गरेर मैले के अपराध गरे?’
उनले अमेरिकास्थित नेपाली कांग्रेसको प्रवासी संगठनले निर्णय नै गरेर आफूविरूद्ध उजुरी हालेकाले त्यतातिर ध्यान दिन प्रमुख प्रतीपक्षी कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराए। ‘यस्ता मानिसहरू कसलाई प्रहार गर्दा अहिलेको परिवर्तन उल्ट्याउन सकिन्छ भन्नेमा लागेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तालाई प्रहार गर्दा त्यो सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुन्छ। त्यो एउटा प्रवृत्ति हो। हामीले त्यस्तालाई रोक्नुपर्छ।’
यसअघि अमेरिकाबाट फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रचण्डले आफूलाई अमेरिकामा भूमिगत शैलीमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको थाहा पाएको बताएका थिए। उनले आफूलाई अपराधीका रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
एउटा नेपालीले नै हत्याराका रुपमा दुनियाँको अगाडि उजुरी गरेको भन्दै उनले थपे- ‘नेपालभित्रै बसेर अलिअलि गर्न मिल्ला, नेपाली–नेपालीबीच आलोचना हुन सक्छ । तर विदेशमा बसेर नेपालको शान्ति सम्झौतालाई आपराधिक सम्झौताको रुपमा, हस्ताक्षरकर्तालाई अपराधीको रुपमा प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पक्राउ गरेर जेल हाल्नुपर्यो भन्नु कति तर्क संगत छ ?’
यस्ता कुराले आफू नडराएको बरु दुःखचाहिं लागेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय नेपालको उपलब्धिमाथि आक्रमण र षडयन्त्र भइहेको पनि उनले बताए ।
‘मलाई अपराधी भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि अपराधी नै होला । शान्ति सम्झौतामा त कांग्रेसले पनि हस्ताक्षर गरेको हो ।’ प्रचण्डले अगाडी भने ‘शान्ति सम्झौता प्रचण्ड एक्लैले गरेको त होइन । गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित ७ राजनीतिक दलले पनि गरेका हुन् ।’
प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएको बेला तिलक श्रेष्ठ नामका नेपालीले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दाहालकै कारण हजारौं नागरिक मारिएको, हजारौं अंगभंग र वेपत्ता बनाइएको र तिनले अझै न्याय नपाएको भन्दै दाहाललाई पक्रन एफबीआईमा उजुरी गरेको थिए ।
उनले प्रचण्ड आतंककारी भएको भन्दै अमेरिका आएको बेलामा पक्राउ गर्न माग गरेका थिए । प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याएर फेरी पुरानै निरंकुशतन्त्र ल्याउन नेपालमा असम्भव रहेको पनि जिकीर गरे ।
उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आलोचना र विवाद हुनु सामान्य भएपनि राष्ट्रहितमा सबैबीच समझदारी बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने संकेत पनि गरे ।